MW Saciid Deni iyo Ra'iisal Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmad oo kulan albaabada u xiran yihiin ku yeeshay Addis Ababa - Muqdisho Online
Home Wararka MW Saciid Deni iyo Ra’iisal Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmad oo kulan albaabada...
MW Saciid Deni iyo Ra’iisal Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmad oo kulan albaabada u xiran yihiin ku yeeshay Addis Ababa
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Puntland Saciid Cabdullahi Deni oo maalmihii u danbeeyay ku sugnaa magaalada Addis Ababa ayaa waxaa uu kulan albaada u xiran yihiin la yeeshay Ra’iisal Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmad, kulanka ayaa waxa uu ka dhacay guriga Ra’iisal Wasaaraha Itoobiya ka dagan yahay magaalada Addis Ababa.
Kulankan oo aan lagu faafin warbaahinta iyo baraha bulshada ee dalka Itoobiya iyo kan Puntland ayaa ahaa mid si gaar ah ay ugu wada kulmeen labada mas’uul. Kulanka ayaa waxaa qaban qaabadiisa lahaa wasiiro ka tirsan dowlada Itoobiya iyo wadamo saaxiib la ah labada dhinac. Wafdiga la socday Madaxweyne Deni oo aan waydiinay kulanka labada dhinac ayaa ka gaabsaday in ay ka hadlaan kulankaas iyaga oo ku soo gaabsaday “Madaxweyne Deni mas’uuliyiin ka tirsan dalka Itoobiya ayuu la kulmay inta uu joogay dalka Itoobiya”.
Waxa sidoo kale soo dhawaynta Saciid Deni qayb ka ahaa qunsulka Itoobiya u fadhiya caasimada dowlad goboleedka Puntland ee Garowe. Abiy Axmad ayaa horay uga codsaday wakiilada ka jooga Puntland iyo Somaliland in ay fududeeyan wadahdalka iyo xal u helida dagaalka u dhaxeeya labada dhinac.
Madaxweyne Deni ayaa inta uu joogay magaalada Addis Ababa waxa uu sidoo kale kulamo la qaatay madaxda Midowga Afrika iyo urur goboledka IGAD.
Puntland ayaa waxa ay xuduud balaaran ay la leedahay dowlada Itoobiya, waxaana ka dhaxeeya ganacsi. Labada dhinac ayaa horay u galay heshiisyo la xiriira qaabka canshuur qaadista ee badeecadaha u soo kala gudba labada dhinac.
Dhanka kala maalinta jimacaha ayaa waxa ka furmi doona magaalada Wardheer ee dalka Itoobiya kulan balaaran oo ay ka qayb gali doonaan isimada Puntland iyo kuwa degaanka Soomaalida.
Madaxweyne Deni ayaa inta uusan imaanin magaalada Addis Ababa waxa uu soo maray dalka Imaaraadka Carabta halkaas oo shirar gaar ah kula yeeshay dowlada Imaaraadka.
Previous articleC/rashiid Xidig oo lagu eedeeyay in uu lacag ku qaybinayo magaalada Nairobi
Next articleMW Farmaajo gudi baaris ma u magacaabi karaa dowlad Goboleedka Hirshabeele?